Sirta Ganacsiga Salon: 10 Fikradaha Suuqgeynta Waxqabadka Leh ee kaa caawin kara inaad sugto Macaamiil badan | Martech Zone
Sirta Ganacsiga Salon: 10 Fikradaha Suuqgeynta Waxqabadka leh ee kaa caawin kara inaad sugto Macaamiil badan
Khamiis, Maarso 14, 2019 Jimce, Maarso 15, 2019 Suzy Viola
Salooniyadu waxay maalgashi badan ku sameeyaan goobtooda, shaqaalahooda iyo takhasusyadooda, qalabkooda, iyo wax soo saarkooda. Si kastaba ha noqotee, hal shay oo inta badan ay iska indhatiraan maalgashiga waa ololahooda suuqgeynta. Sidee ayay macaamiisha u heli karaan salon kuu fiican haddii kale?
In kasta oo suuqgeyntu ay noqon karto shay khiyaamo badan oo la fahmi karo, haddana waa mid la maareyn karo, loomana baahna cabsi. Waxaa jira fikrado badan oo suuq geyn ah oo la isku dayay laguna tijaabiyay meelaha lagu qurxiyo oo si fiican uga shaqeeya soo jiidashada macaamiisha iyo hagaajinta haynta macaamiisha.
Haddii aad tahay milkiile halgan adag oo doonaya inuu xoojiyo barnaamijyadooda suuqgeynta, ka dib aqri si aad u ogaato fikradaha suuqgeynta ee aad sameyn karto si aad u xaqiijiso macaamiil badan.
Sii barnaamij tixraac-saaxiib ah - Hal dariiqo oo lagu kordhiyo tirada macaamiishaadu waa adigoo la shaqeeya kuwa aad horay u haysatay. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida. Waa hagaag, iyada oo loo marayo barnaamijka gudbinta dabcan. A barnaamijka tixraaca waa barnaamij lagu bartilmaameedsanayo macaamiishaada hada. Fikraddan suuqgeyntu waxay ku dhiirrigelineysaa macaamiishaada inay saaxiib kuu diraan qolkaaga saloon adigoo siinaya qiimo-dhimis u gudbin kasta oo guuleysata oo la sameeyo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijka gudbinta ayaa ah in dadku ay u badan tahay inay wax ka qabtaan gudbinta marka loo eego wicitaan qabow ama iimayl aad ka hesho. Marka taladu ka timaado ilo lagu kalsoon yahay iyo ilo ku dhow, waxay u badan tahay inay hesho dareenka macaamiisha cusub. Macaamiisha la tixraacay waxaa lagu ogaadey inay ka daacad badan yihiin macaamiisha caadiga ah. Mid kale oo lagu daray ayaa ah inay u dhego nugul yihiin adeegsiga alaabadaada iyo adeegyadaaga.
Sameyso iskaashi ganacsiyo kale - Waxaa jira dariiqooyin badan oo qofku ku abuuri karo meheraddooda. Hal dariiqo oo aad ugu sareyso tartanka waa iskaashi lala yeesho ganacsiyada kale. Badanaa waxaan iska indhatirnaa suurta galnimada wadashaqeyn lala yeesho ganacsiyada kale iyo sida ay u horseedi karto taraafiko badan iyo dakhli labadaba ganacsigaaga ah. Saloon ahaan, waxaad la kaashan kartaa ganacsiyo badan. Waxay kuxirantahay deegaanka, waxaad iskaashi la yeelan kartaa ganacsiyada sidoo kale kula jira warshadaha qurxinta. Tusaale ahaan, waxaad kula xiriiri kartaa meesha aad doorbideyso duugista, ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iskaashi la sameysato spa. Fikraddan suuq-geynta ah, waxaad kuheli kartaa macaamiishaada oo keliya laakiin macaamiisha kale ee ganacsiga. Waxay u noqon doontaa xaalad guuleysi ah labada ganacsiba iyo macaamiisha sidoo kale heshiisyada ay helayaan dartiis.
Sii dalacsiinta salon - Yaan jeclayn qiimo dhimis? Tani waa sababta qiimo dhimista, iibinta, iyo dallacsiintu had iyo jeer u yihiin qorshe suuqgeyn waqti-tijaabin ah oo si fiican ugu shaqeeya ganacsi kasta. Xayeysiintaada iibinta waxay ku xirnaan kartaa arrimo badan. Waxay u noqon kartaa booqdayaasha markii ugu horreysay, ama laga yaabee fasaxyo gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa dejin karto sicir-dhimista mushaharka ama iibka toddobaadlaha ah. Xayeysiinta saloon, waxaad ku kordhin kartaa taraafikada qolkaaga waadna kordhin kartaa ballansashada. Dabcan, markaad heshay kororka duubista, waxay u dhowdahay inaad abuurto iibsi sidaas darteed dardargelinta saloon ee sifiican loo fuliyay ayaa sidoo kale sare u qaadi karta dakhliga.
Ka faa'iideyso suuqgeynta warbaahinta bulshada - Bulshada quruxda ayaa baryahan baraareysay baraha bulshada waana muhiim in milkiileyaasha saloonada ay ka faaideystaan ​​tan. Had iyo jeer u samee koontada warbaahinta bulshada qolkaaga si aad ugu sahlanaato saloonkaaga inay soo ogaadaan macaamiil aad u danaynaysa. Mar alla markii aad koonto shaqo kuhesho aaladaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, ha ilaawin inaad suuq geyso ganacsigaaga. Wax ka beddel xayeysiintaada iyo xeeladaha suuq geynta bulshada iyada oo ku saleysan barxad kasta oo khibrad shaqsiyadeed loogu talagalay dadka isticmaala. Ka faa'iideyso barxadda wadaagista sawir ee ku saleysan sawir-qaadashada ugu horreysa ee Instagram oo dhaji muuqaallo la yaab leh si aad u hesho dareenka macaamiisha xiisaha leh. Kordhi hashtags-kaaga iyo ereyada muhiimka ah si aad uhesho nooca saxda ah ee dareenka.
Inbadan kuxiro adoo adeegsanaya suuq geynta emaylka - Markay tahay u-suuqgeynta meheraddaada khadka tooska ah, ha moogaanin inaad ku suuq-dhigto ganacsigaaga ololeyaal emayl ku saleysan. Tan ayaa loogu talagalay macaamiisha aan raacin koontooyinkaaga warbaahinta bulshada laakiin ku siiyay emailkooda. Faa'iidada adeegsiga ololeynta suuqgeynta iimaylka ayaa ah inaad natiijo badan ku hesho qiimo jaban. Sidoo kale, waad isticmaali kartaa suuqgeynta emailka si aad u fuliso qaar ka mid ah fikradaha suuqgeynta ee horay loo soo sheegay. Tusaale ahaan, waxaad ku soo diri kartaa emayl leh xiriirin tixraacyo gundhig ah si aad ugu dhiirrigeliso macaamiisha inay u diraan saaxiib si ay qiimo dhimis ugu sameeyaan. Waxaad sidoo kale ku dhiirrigelin kartaa iib ama dhiirrigelin macaamiisha aan ka warqabin adoo adeegsanaya emaylkooda. Waxaas oo dhan iyo in ka badanba waxaa lagu sameyn karaa emayl waxaadna ku hagaajin kartaa howshan adoo adeegsanaya a nidaamka maaraynta alaabada.
Isticmaal barnaamijka jadwalka - Adeegsiga jadwalka jadwalka si aad ballan uga qabsato ballantaada waxay kaa caawin kartaa hagaajinta hawsha waxayna ka dhigeysaa mid ku habboon jadwal u-helidda shaqaalaha iyo macaamiishaada. Waxaa jira astaamo badan oo loogu talagalay macaamiisha iyo shaqaalaha inay ka faa'iideystaan ​​markay isticmaalayaan barnaamijyada noocan ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya ballan qabsashada ballanku waa cusbooneysiinta waqtiga-waqtiga-dhabta ah ee macaamiisha ay ka eegi karaan khadka tooska ah. Tani waxay u fududeyneysaa macaamiisha inay go aansadaan goorta ay rabaan inay jadwalaan ballamahooda daaweynta ay doorbidaan. Taas ka sokow, jadwalka jadwalka ayaa xusuusin kara macaamiishaada ballamaha ay dhigteen xaruntaada. Haddii macaamiisha ay tahay inay kansal gareeyaan, ugu yaraan laguma soo ogeysiin doono maalinta. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad iska fasaxdo waqtiga aad ku aqbasho ballan kale.
Ku soo biir howlaha ka socda deegaanka - Mid ka mid ah meelaha badan oo lagu qurxiyo oo aan ka faa'iideysan waa bulshada deegaanka. Saldhigyada ugu wanaagsan waxay leeyihiin nooc xiriir ah bulshada maxaa yeelay, intaas kadib, taasi waa halka ay inta badan ganacsigooda ka yimaadaan. Tani waa sababta saloonigu ay tahay inay ku dadaalaan sidii ay ugu biiri lahaayeen howlaha deegaanka. Hadday dhacdooyinka yihiin ciidaha ama laga yaabee inay yihiin kuwo loogu talagalay bandhigyada moodada, tusitaanka taageeradaada oo keliya ayaa ka dhigaysa magaca meheraddaada inuu halkaas ku faafo oo uu kordhiyo macaamiishaada.
Dib ugu celi bulshadaada - Isagoo ka hadlaya ku biirista howlaha maxaliga ah, hal dariiqo oo xiriir lagula yeesho dadka deegaanka ayaa ah dib u siinta bulshada. Waxaa laga yaabaa inaad weydiisato maamulka deegaanka habab aad ku caawin karto bulshada. Waxaa laga yaabaa inaad ku siin karto timo jaris bilaash ah kuwa hoy la'aanta ah. Waxaa laga yaabaa inaad gacan ka geysan karto maalgelinta dhacdo samafal oo dhici doonta mustaqbalka. Tani waa hab wanaagsan oo loola falgalo macaamiisha cusub ee mustaqbalka ee diiriya qalbiga.
Saloonkaaga ku qoro liistada internetka - Tirakoobyadii dhowaa waxay muujiyeen in aqlabiyadda isticmaaleyaasha moobiilku ay ka raadsadaan ganacsi khadka tooska ah ama shey intarneedka intaysan booqan dukaanka. Tani waa sababta aad ugu baahan tahay inaad ganacsigaaga uga dhigto mid la ogaan karo lana heli karo intii suurtagal ah. Hal dariiqo oo taas loo sameeyo ayaa ah adiga oo ku taxay meheraddaada cinwaanno toos ah sida Yelp ama Google Business. Sidan, macaamiisha xiisaha lihi waxay si fudud u heli karaan qolkaaga saloon oo ay ku aqoonsan karaan saacadaha aad furan tahay iyo adeegyada aad bixiso.
Adeegso xayeysiisyada dib ubeynta - Mar haddii macaamilku booqdo bartaada, haddii ay ku dhammaanayaan iyo haddii kaleba, way fududahay in laga dhigo iyaga ka beddelaya macaamiisha cusub ee aan waligood la macaamilin astaantaada gabi ahaanba. Si loo bartilmaameedsado macaamiisha noocan ah, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo xayeysiisyada dib-u-habeynta. Haddii aad hadda uun soo saartay badeecad ama daaweyn cusub, ka dib hubi liiska macaamiishii hore ee ay u badan tahay inay xiiseynayaan iyaga oo ku bartilmaameedsada xayeysiiska sheyga / daaweynta la yiri.
Suuqgeynta suuqgeyntaada macnaheedu maahan inaad ku bixinayso lacag badan boorarka ama ku dhajinta waraaqaha hareeraha magaalada. Waxaa jira fikrado badan oo suuq geyn ah oo waxqabad leh oo aad sameyn laheyd maanta.
Waxay ku saabsan tahay inaad la xiriirto suuqaaga bartilmaameedka ah iyo sidoo kale inaad u furto saloonkaaga bulshada maxalliga ah. Ha sugin wax intaa ka badan intaadan bilaabin hirgelinta istaraatiijiyaddan suuq geyn si aad ugu hagaajin karto inay xitaa ka fiicnaadaan sida ugu dhakhsaha badan.
Tags: Email Marketinghowlaha maxaliga ahdallacaadahadib-u-celintasalonsuuqgeynta saloonjadwalka barnaamijkaMedia Social Suuq
Suzy Viola waa khabiir ku takhasustay suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo sawir qaade. Waxay jeceshahay inay aqoonteeda iyo danaheeda u wadaagto qof kasta oo ku hoggaamiya inay noqoto qoraa madax-bannaan. Iyo Oh! Iyaduba waa safar.
10 Qalab Qorista Mawduucyada cajiibka ah ee Suuqgeynta cajiibka ah
Rajada Isku Darka Tikniyoolajiyadda Blockchain Iyo Internetka Waxyaabaha